UMHLABA OMANGALISAYO WOMCULO WETHALA LEENCWADI - IINDABA
Umhlaba oMangalisayo woMculo weThala leencwadi
Indawo enothuli yomculo waselayibrari -ingoma yentsusa yeelebheli kwaye yabolekiswa kwiTV, unomathotholo, kunye neeprojekthi zefilimu-ibonakalise ukuba ngumthombo ongapheliyo wesampulu wabavelisi behip-hop kunye nokukhuthaza abavavanyi be-avant-garde.
Amabhaso omculo wevt 2019 wemv
Nge-20 kaMeyi 2014
I-Starter inikezela ngentshayelelo kubazobi, imiboniso, izimbo, okanye iilebheli zexesha elidlulileyo, kunye noluhlu lokudlala.
Imbali ye pop ayifane ibhalwe ngabadlali bemvelaphi- kwaye nanamhlanje, xa abaqambi befilimu, iimvumi zeseshoni, kunye nababhali beengoma ezizimeleyo befumana ilungelo labo, kusekho into engaqondakaliyo nothuli malunga nomhlaba womculo wamathala eencwadi. Ngamafutshane, umculo waselayibrari (ukuveliswa aka okanye umculo wesitokhwe) ngumculo orekhodwe kwimixholo emininzi kunye nezitayile zeemvumi zokuqesha, ezingabanini beelayibrari zomculo, kwaye zibolekwe kumashishini orhwebo kumabonwakude, unomathotholo nakwifilimu . Ngamanye amaxesha lo mculo unamathela-umzekelo, imixholo yazo zombini 'NgoMvulo ebusuku ngeBhola ekhatywayo' kunye nenkqubo yezemidlalo yase-UK 'Iinkwenkwezi' Zombini zazifunyenwe Intshukumo enzima , Ngo-1974 ukurekhodwa kwifayile ye- KPM Umculo ileyibheli. Kwaye ngamanye amaxesha bavuselelwa njengexesha lokutya, njenge Isandi somculo sikaAdrian Younge kwi-spoof yoqhekeko IBlack Dynamite . Okona kuninzi, nangona kunjalo, iimpembelelo zabo zivela emva kokuba baphinde baphinde baphinda baphinda baphinda baxubeka ngakumbi kunakubadali babo ababelindele: Ukuthatha umzekelo omnye, imisebenzi yegubu kunye nomqambi UBrian Bennett Baye batshitshiswa ngumntu wonke ukusuka kuMike Uya kuyenza ukuba i-Kanye West iye kwiAlchemist.
Ngokwesiqhelo igxothwe kwi-crate-digger curiosities ngendima yabo njenge fodder yesampulu, iirekhodi zomculo zethala leencwadi ngeminyaka yee-1960 kunye nee-70s zithande ukuxhomekeka ngakumbi ekusetyenzisweni kwemood-setting kunobuntu obahlukileyo. Abaqambi babenokusebenza phantsi kwegama elithile, amagama amagcisa ayedla ngokufakwa kumkhono wangasemva, kunye neelebheli ezithile-ngakumbi i-KPM yaseLondon, eyayikhupha phantse zonke ii-LPs zabo kwisingxobo esifanayo somnquma-siluhlaza ngelixa bebeka uphawu lwabo ngaphezulu Isazisi esithile somculi. Yibize kwelinye icala le-poptimism: Njengabavelisi abaphezulu, ababonisa italente ye-alumni, kunye nababhali beengoma ababhaliweyo be-Hot 100 bayakwazi ukwenza iingoma ezigqithileyo kwimigca ebizwa ngokuba yindibano, ngokunjalo nabo babephantsi kolawulo Abaqambi kunye nee-okhestra zee-eras zangaphambili, ezazinethemba labo elikhulu ngomsebenzi wabo wokufumana amanqaku kumdlalo bhanyabhanya we-sci-fi ophantsi okanye u-thriller wamaxesha amabini. (Okanye, ngokungathandekiyo, kwi-porno-le stereotypical whock-a-chicka cue kwafuneka ivele umntu othile .)
Umculo waselayibrari usinika umfanekiso
umculo wemihla ngemihla wawuvakala kumashumi eminyaka eyadlulayo.
Ngezo ndima engqondweni, umculo wethala leencwadi uhlala uwela kwiindlela ezintathu. Ezinye iirekhodi zazingumlinganiso weTop 40 kunye nezandi zomdaniso, ezishiyekile ukuba zithathwe ngabenzi beTV kunye nabavelisi befilimu abangaziva ngathi bayikhusela inqaku lokwenyani. Eyona nto yayiqhelekile yayiyinto eyahlukileyo kwi-jazz ephucukileyo okanye kumanqaku e-okhestra enama-funk enziwe ngokuthandwa ngu UHenry Mancini , Lalo Schifrin , kunye noIsaac Hayes. Kwaye kwezinye iimeko eziphawulekayo, amathala eencwadi omculo anokuququzelela imisebenzi yesazinzulu esoloko ichaphazela i-avant-garde synth, ambient, kunye umculo wekhonkrithi ngeendlela abavavanyi bezilingo abasakhangela kude kube namhlanje.
Ingxaki iyaqhubeka, nangona kunjalo: Uphi na fumana lomculo? Kuba umculo waselayibrari uhlala ukwakhelwe kwi-imprimatur yeelebheli endaweni yamagcisa, kuye kwakho inani lezinto ezilungileyo zokuya kwilebheli ezihlanganisiweyo ezijolise kwingxowa yokubamba yamagcisa amanyene phantsi komxholo othile ongathandekiyo. Strut's Umculo woMdaniso uthotho lujolise kwiilebheli ezimbalwa zase-UK ezinjengeKPM, IBosworth , kunye Chappell , ngelixa Umculo De Wolfe -Eyona ilebheli ifunwayo ngokubanzi kwizangqa zabenzi be beat-ikhuphe iingqokelela ezimbini ezibizwa ngokuba Ukuluma ngakumbi . Iminikelo evela kwilizwekazi laseYurophu inzima ukufumana, kunye neerekhodi ezilungileyo kwiFrance Iinguqulelo zeMontparnasse 2000 , EItali IGemini , okanye eJamani Isandi esikhethiweyo ikakhulu zibalulekile kwisekethe yabaqokeleli. Njalo umntu uhlala ephikisana nomculo onqamlezileyo: uLuka Vibert Iimpawu ezintle Iingqokelela, ixesha elifutshane Iifilimu uthotho oluvela ku-Emperor Norton, kunye nokuhlanganiswa okuninzi okubizwa ngokuba yi-Italian reissue label Ixesha elilula Zonke zigqamile ekuphakameni komculo wethala leencwadi-imvuselelo-yokuphinda kufunyanwe kwakhona kufutshane '90's nasekuqaleni' 00s. Kodwa ngomdla onjalo, uninzi lwala ma-albhamu kungekudala luzakuphuma lushicilelwe, ukuba ziphinde zaphinde zakhishwa.
Mhlawumbi yindlela ekufanele ukuba njalo ngayo. Ukuba kukho into efana nomculo wesingqisho, yiyo le- ukurekhodwa okwenzelwe umzuzu othile kwaye kudla ngokufayilwa xa loo mzuzu udlulile, xa iHammond B3s yenza indlela ye-synths, okanye izingqisho ze-disco zijika emva kokunyuka kwamaza amatsha . Basinika umfanekiso wendlela umculo wemihla ngemihla ovakala ngayo kumashumi eminyaka eyadlulayo, ngaphandle kwemida yeetshathi zepopu okanye umhlaba ophantsi owaziwayo.
IiMohawks: IChamp (Ngo-1968; Iirekhodi zePama)
Uyayazi le ngoma-okanye imizuzwana embalwa yayo. I-groove ibisisitya esityibilikayo ukusukela oko kwakudala amaqela aseBronx kwii-70s kwaye, kubavelisi behip-hop, ukusika iChamp kungangokubaluleka kwezobugcisa njengokufunda Ummi Kane kubenzi beefilimu. Injalo ke imitha engacacanga yesixhobo esisisixhobo esivela kwimvumi yeseshoni eyazalelwa eLeeds UAlan Hawkshaw ifumene ukuzihlikihla iingqiniba kunye noJames Brown kwiikreyiti. Ukurekhodwa ngenani labadlali beeseshoni phantsi kwegama elinobuhlobo le-pop iMohawks, ngo-1968 I-Champ ngobuchwephesha ayisiyo irekhodi yethala leencwadi, kodwa yanqunyulwa yindoda eya kuba lelinye lawona magama makhulu kolu shishino kungekudala. Umtsalane weHawkshaw kunye nelungu leHammond lisebenza ngokupheleleyo apha, kwaye kamva waqhubekeka esiya kwi-KPM, De Wolfe, kunye ne-Themes ngegalelo lakhe kwii-albhamu ezinje nge1969's IBig Beat nowe-1973 Pearl emnyama . Ibrashi ye-Hawkshaw kunye ne-pop yorhwebo ayiphelanga nge-Champ, nokuba: Ngaphantsi kwebhanti ye-Love De Luxe, akazange athabathe # 1 umdaniso obetha ngomzuzu we-15 we-disco marathon Naku Kuza Eso Sandi Siphinde -Siqu sayo sitolikwe kwisingeniso ukuya Uyolo lukaSugarhill Gang .
Iintsuku ezingama-30, iingoma ezingama-30
UDelia Derbyshire : Iivili eziBlue kunye neesanti zegolide (Ngo-1971; iRadioophonic ye-BBC)
Iworkshop yeRadioophonic ye-BBC yasekwa ngo-1958, kwiminyaka emibini emva koko Isandi sikaLouis noBebe Barron Iplanethi engavumelekanga waba ngomnye wemizekelo yokuqala yomculo we-elektroniki kwinkcubeko ye pop. Kwisithuba esingaphantsi kweshumi leminyaka, iworkshop yandise amathuba enokwenziwa kwelo candelo, isenza ingoma yengoma kunye nomculo ohambelanayo we-sci-fi hit 'Doctor Who' apha endleleni. Uninzi lwalo msebenzi yayi luxanduva lukaDelia Derbyshire, owabonakala ngo-1971 Umculo weRadioophonic we-BBC Ukudityaniswa ziimbalasane ezithile. Esi siqwenga sasisekhaya njengemixholo yesiqendu sowe-1967 somboniso we-BBC othi `` Ihlabathi Malunga nathi '' egxile kubantu baseTuareg eSahara, kunye nomculo ohambelana nawo. isiqendu esithandwayo ngumlandeli ka-1970 'kaGqirha Ngubani' u-Inferno , kunye nemvelaphi yayo kwiziseko ezivakalayo zesandi umculo wekhonkrithi * - * kubandakanya ukuphinda-phindwa kokuhluzwa kwesitampu sesibane sesinyithi kubethwa-kwenza ukuba ibe sisiqwenga esifanelekileyo sokufumana amanqaku ngeendlela zakudala kunye neentsomi zexesha elizayo.
Ennio Morricone: Ngokuqina okuqinisekileyo (Ngo-1972; eGemini)
Ezinzulu kwincwadi yeefowuni ebungakanani-bencwadi yediski ye-Ennio Morricone luthotho lokurekhodwa kokusebenzisana okusimahla kunye neqela elithandekayo Iqela elitsha lokuPhuculwa kweConsonance , nje ngomnye umsebenzi omnike phantse ukubonwa njengobalulekileyo kwizangqa zeklasikhi njengangoku phakathi kwabahlaziyi befilimu. (Vele ubuze UJohn umsindo .) Kwaye nangona kusenokubonakala kungaqhelekanga ukuqaphela iMorricone eyinxalenye yethala lomculo laselayibrari-ingoma ebhaliweyo ngaphandle kwefilimu engqondweni iyinto engaqhelekanga kwikhathalogu yakhe-ikwayindawo entle yokungena kutyekelo lwakhe oluphambili. Ngokuchasene neSigaba yakhululwa phakathi kwengqokelela yeengoma zokuqala ezingama-70s ezazolula ubuchule bokuqanjwa kukaMorricone ngokomxholo wezinto ezithandabuzekayo, imidlalo yolwaphulo-mthetho, ukoyikeka okungaphaya kwendalo, kunye neliza lokugqibela le-spaghetti Westerns. Icandelo lomtya owoyikekayo lifana nokuvunyelwa kukaMorricone weempawu zomxholo kumxholo Ingqondo , yeyiphi eyona nto abantu abaninzi abazi ukuba bafuna ukuyiva bade bazi ukuba ikhona- kodwa icwecwe likwabonakala lisekhaya ecaleni kwe-orchestral minimalism kaPhilip Glass noKronos Quartet.
URon Geesin : Syncopot (Ngo-1972; KPM)
Kukho isikhokelo somsebenzisi esincinci ngasemva komkhono wohlobo oluthile kuRon Geesin Umbane Ndibonisa ezinye ii-tunes, ii-tunes, ii-anti-tunes, izandi ezonwabisayo nezingaqondakaliyo kuzo zonke iintlobo zeenjongo kwaye zichaza ukuba: Iziqwenga ezilapha zibonisiwe zinokudityaniswa nazo (okuninzi ngaphandle kokuvumelanisa okunokwenzeka) ukufezekisa imeko eshushu kakhulu, kunye ukudlala izinto ngesantya esahlukileyo akuyi kuba yinto ephosakeleyo! Le ndlela yokudlala kumculo ovavanyiweyo we-elektroniki ubonakala kufanelekile kwindoda esebenze kuqala kunye noRoger Waters kuvavanyo lwe-biomusic Umculo ovela kwiQumrhu kukhokelele ekubandakanyeni kwakhe ekuhleleni nasekulungiseleleni i-Pink Floyd Umama wentliziyo yeAtom . Umbane Ngaba olu luvo lusasazeke ngokukhululekileyo kuyo, kodwa kuyilo; Ukudideka okunesingqi kodwa ukusika okuqhubayo kweSyncopot kunayo yonke imvakalelo ye-precursor-goosey precursor Icala elimnyama lenyanga Ingxakeko enkulu Ekubalekeni .
umhla wokukhutshwa kwethiyori enkulu yentlanzi
UJanko Nilovic : Iseshoni engaphantsi komhlaba (Ngo-1974; MP 2000)
Umdlali wepiyano ongumFrentshi-waseMontenegro uJanko Nilovic ebenesandla kwiingoma ezininzi kunye nokurekhodwa kwethala leencwadi kwii-60s kunye nee-70s ukuba ulahlekile ngokubala-ngakumbi xa enikwa ukuba zingaphi izifekethiso azisebenzisileyo kule minyaka idlulileyo. (Abambalwa kunabo banemibala egqamileyo: UJohnny Montevideo, uEmiliano Orti, kunye noTonton Roland Et Ses Pianos - Amadevu.) Ngo-1974 uLP Isingqisho sangoku kuyeyona nto ayithandayo (kwaye ifikeleleke kakhulu, ithini ngayo ekubeni ikwi-iTunes nge- $ 5 nje). Apha, uNilovic kunye neqela labadlali beemvumi-ngaphezulu kweshumi elinambini badweliswa kwi-albhamu- bajongana nengoma, i-uptempo, isigaba se-funk esinolwazi lwe-jazz yomphefumlo, abagqibe ngee-gong hits, ii-congas ezi-palpiting, i-reptilian shredding shredding, kunye nomkhosi wokutshaja Amacandelo ephondo abonakala ngathi ahlelisiwe ukuba aye kwindawo yesimo se-Shaw Brothers yobugcisa bemfazwe. Oko kunokuba kukukhetha umculo wokhetho emsebenzini, nangona-ngekhe kungabikho ndawo kwikhathalogu ye-jazz yomphefumlo ye-70s yeBlue Note, nokuba.
UBernard Fevre : 'Umdaniso weMolekyuli' (Ngo-1975; Umzekeliso woMculo)
IQela likaDeveli iDisco Disco Club kaBernard Fevre ibisoloko ingomnye wezinto eziphindaphindayo eziphindaphindayo ezivela kumathala eencwadi omculo ongaphezulu kwe-70s, njengoko isandi sikaFevre sikaEurodisco sibaleke kwi-canny Moroder -ism ukuya kwi-kitsch enefluffy. Ngumsebenzi awawenzayo ngaphambi kokuqala kuka-1978 uMtyholi oMnyama uLP owambeka phakathi komculo wethala leencwadi onomdla ngakumbi-ubungqingqwa obabuzazi ngokwaneleyo ukwenza Ihlabathi eliQhelekileyo likaBernard Fevre zombini irekhodi yakhe ephezulu yethala leencwadi kunye nemithombo yolwazi ukurekhodwa kwakhona ngo-2009 . Umdaniso weMolecule yenye yeendlela ezingasasebenziyo kwirekhodi, ejolise kufutshane nomculo wemovie omdaka kunye nowothusayo kunesixhobo sokudanisa awaphuma naso. Kodwa kusekho i-chunky, ezantsi-nzulu groove phantsi kwazo zonke izinto ezithandekayo zeplastiki-ze-analog synthesizers.
UDave Richmond : Ukudibana (Ngo-1975; KPM)
Kukho iimeko ezimbini ezaziwayo zale ngoma ezisetyenziselwa injongo yazo yokubonelela ngomculo wangasemva: ukubonakala kuRadley Metzger ka-1976 we-porn-ne-plot-comedy Ukuvulwa kweMisty Beethoven , kunye nendawo ye1979 kwintengiso yaseBritane emva kweDenim. Into ehlekisayo kukuba, kwingoma esele isetyenziselwe ukukhapha imiboniso engokwesini ecacileyo nengacacanga, ikwayinto yesilwanyana esikhulu, esixhonyiweyo, esigweba ngamatye-kuthatha uhlobo oluthile lombono we-cinematic ukuva oku kwaye ucinge ukuba kuyavusa yobubi. Umkhondo usebenza kakuhle xa usikiwe kwaye utshixiwe ukugxininisa kwiimpawu zawo ze-sleazier, kodwa njengamava apheleleyo ufumana i-visceral ephawulekayo-inkqubela-phambili yentsimbi ebetha, i-creaks, i-crumbles, iinyembezi, kwaye ekugqibeleni ifaka kwi-crescendo emfutshane yomzuzu kunye nengxelo umtya wentuthumbo oza ngathi yimizuzu yokugqibela yeseshoni yejam phakathi Ibhendi yoMhlaba kaManfred Mann kunye no-Sonic Youth. (URichmond ngokwakhe wadlala ibass kunye noManfred Mann kwiminyaka yabo yokuqala, kodwa umsebenzi wakhe wokuthweswa isithsaba unokuba ziiseshoni zakhe zokudlala USerge Gainsbourg Ibali likaMelody Nelson .)
UBeverly Herrmann : Omkhulu (Ngo-1977; Ithala leMculo leNFL)
IMelika ibingaziwa ngokuvelisa izindlu zomculo ezininzi njenge-UK neYurophu. Ngapha koko, eminye yemixholo yethala leencwadi eyaziwayo ukuba isetyenziswe kwii-70s Stateside programming- from 'This Week in Baseball' (John Scott's Isihlwele Esihlanganayo ) 'kwiNkundla yaBantu' ( UAlan Tew Omkhulu -Uvela e-UK. Kodwa enye into eyahlukileyo yayikukukholwa kwiifilimu zeNFL. Kanye njengokuba umlawuli uEd Sabol etshintshe kakhulu indlela ezenziwa ngayo imidlalo yezemidlalo, abaqambi kunye neeokhestra wazitsalela kumxube wayitshintsha indlela ivakaliswe , iimfazwe ezinje ngemfazwe kunye neengoma ezivuselelayo zamaqela okuhamba abekwa kwindawo ebukhali ngakumbi, amaxesha ngamaxesha kumnandi. Omkhulu (ukuba angabhidaniswa nolwakhiwo luka-Alan Tew) sisidlakudla esixhaphaza amagxa esiqhekeza, yonke into enobhedu obunzima, imitya yediski enobundlobongela, kunye nomgqomo wekatala ovakala ngathi udlalwe ngumntu onesithuthuthu esongelwe ejikeleze amaqhuma akhe. Yivile, kwaye kuyacaca ngokukhawuleza ukuba yahlulahlula njani ngokuzithandela umahluko okhulayo phakathi komgca okhuselayo kunye neqela elibetha.
UKlaus Weiss Rhythm kunye neZandi : Usindileyo (1978; Isandi esikhethiweyo)
Intandokazi yomvelisi uGaslamp Killer, owayifaka kwimixube yakhe ka-2009 Isihogo kunye neChibi loMlilo zikulindile! , Umsindisi kaKlaus Weiss ngomnye weyona mizekelo mihle yomculo waselayibrari wama-70 wasemva kwexesha onokuwufumana: ingoma yengoma ekhawulezayo egudla isundgily ephuma kwindawo engenanto ngaphandle kokubetha ngabom komgibe kaWeiss-ubunzima bokuwubamba . U-Weiss wayenomsebenzi omde kumculo waselayibrari, kunye nokuzonwabisa okuninzi kunye nabantu ababethayo ababewuxabisile umkhwa wakhe wokudibanisa ikhefu elimnandi kunye nezihlanganisi ze-chunky, kodwa ngekhe aphume njengoko enzile apha. Ukuba iSabatha eNtsundu ibethe uKraftwerk ukuya Umsebenzi weRadiyo , le iya kuba yeyabo Ohm Sweet Ohm .
Isangqa seNgcebiso: Ngokuqhelekileyo (2008; Ibhokisi yoMoya )
Impembelelo yomculo welayibrari iyaqhubeka, kwaye hayi njengeebhloko zokwakha zegcisa elisekwe kwisampulu. Izenzo ezinje ngeSangqa esiCebisayo, iQela lokuGxila, kunye neBelbury Poly- bonke abo barekhode i-UK ileyibhile yoMculo weBhokisi-bahlala bezobeka kwiimpawu zembali yomdlalo bhanyabhanya wesizukulwane esidlulileyo kunye nezandi zesci-fi ukuqamba izandi ezintsha, bedlala ne ukungaziwa okungaziwayo kwabadali bamathala eencwadi-bomculo ukongeza olunye ungqimba lwemfihlelo kwizinto zabo esele zikholeleke kwaye zithatha umculo we-elektroniki kunye nomculo we-psychedelic. Ewe, kuncinci kule mihla akaziwa, kodwa umculo wenzelwe ukukhapha umbono womntu othile we-cinema usoloko ufunwa-nokuba umbono lowo awungowamntu ngaphandle komphulaphuli.
ngeveki mtv vma
I-albhamu entsha kaWillie nelson
Amehlo okujikeleza kwekhephu avulekile
Umsebenzi we-ap ferg remix
ulwazi ipirate flintlock
x (iqela laseMelika) mamela